प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय वृद्धि गर्न नयाँ कम्पनी आउनु स्वागतयोग्य | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय वृद्धि गर्न नयाँ कम्पनी आउनु स्वागतयोग्य
on: २० श्रावण २०७५, आईतवार १४:११ अन्तरवार्ता
प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय वृद्धि गर्न नयाँ कम्पनी आउनु स्वागतयोग्य
सञ्चित बज्राचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु इन्स्योरेन्स
नेपालमा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गइरहेको छ । प्रतिस्पर्धासँगै बीमा कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न पोलिसी सार्वजनिक गरेका छन् । अर्कोतर्फ बीमा समितिले गत असार मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउन नसके मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ । यस्तै संसद्मा बीमा विधेयकका विषयमा पनि चर्चा शुरू भएको छ । बीमा क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, समस्या तथा समाधानका उपायबारे प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसाल र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सारः
बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि तोकेको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन गत असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो ? प्रभु इन्स्योरेन्सले कसरी पूँजी वृद्धि गर्दै छ ?
बीमा समितिको निर्देशनअनुरूप नै हामीले पूँजी वृद्धिका लागि ४६ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरिसकेका छौं । हकप्रद निष्कासण साउन १० गतेसम्म खुला थियो । अहिले बन्द भएर त्यसको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । हामीलाई पूँजी वृद्धिका हिसाबले कुनै समस्या छैन । हकप्रद शेयरले आवश्यक पूँजी पुग्छ ।
चुक्तापूँजी नपुर्‍याउने कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने बीमा समितिको योजना छ, समग्रमा मर्जर नीतिले बीमा क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्छ ?
पूँजी पुर्‍याउन सक्नेले पुर्‍याउँछन् । नसक्नेलाई मर्जरमा जानु एउटा विकल्प हुन सक्छ । नीतिगत रूपमा गर्नुपर्छ भनेको काम गरेरै अगाडि बढ्ने हो । जसरी गरे पनि बीमा कम्पनी आफैमा बलियो हुने हो । क्षेत्र विस्तार गर्ने हो । सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने हो ।
बजारमा नयाँ कम्पनी पनि आएका छन् । नयाँ कम्पनी आउँदा पुराना कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै समस्या त छैन ?
नेपालमा नयाँ बीमा कम्पनी आएका छन्, यो राम्रो हो । प्रतिस्पर्धामा काम गर्नु राम्रो हो । प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय वृद्धि गर्छ । सबै क्षेत्रमा बीमा कम्पनी पुग्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म बीमाको पहुँच ८–१० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा त बीमाको बजार खाली नै छ । यसको दायरा फराकिलो छ । त्यसकारण नयाँ आउँदैमा पुरानालाई समस्या हुने तथा पुराना कम्पनी भएर नयाँ कम्पनीले बिजनेस नपाउने भन्ने अवस्था छैन । कसले कति गर्न सक्छन् भन्ने हो । हरेक कम्पनी आफ्नो रणनीति लिएर बजार जाने हो । आ–आफ्ना पोलिसी बेच्ने हो । ग्राहकले जसको पोलिसी आकर्षक लाग्छ, त्यो लिने हो । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा भए पनि समस्या नै आएको छ भन्ने छैन । तथापि, यसले नेपाली बीमा बजारमा पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । यो समग्र बीमा बजारकै लागि राम्रो हो ।
बीमा प्रतिस्पर्धाले गर्दा कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? बढ्दो प्रतिस्पर्धाको बजारमा कम्पनीलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
बीमा व्यवसायको मूल चुनौती भनेकै यसको क्षेत्र विस्तार अर्थात् दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नु हो । बीमा अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने विषयमा अझै पनि आम रूपमा चेतनाको स्तर माथि आउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ३ लाखको मोटरसाइकल किन्छ । उसलाई मोटरसाइकल किन्न ३ लाख जहाँबाट पनि जुट्छ । तर, त्यसको बीमाका लागि आवश्यक पर्ने सानो रकम भने उसले जुटाउन नसकेको झैं गर्छ अर्थात् बीमा गर्नमा उसको रुचि हुँदैन । जब कुनै घटना, दुर्घटना वा चोरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र बीमा आवश्यक रहेछ भन्ने उसमा बोध हुन्छ । बीमा गर्नुपर्छ भनेर भन्दा बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि गरिएको एकोहोरो प्र्रस्तावको रूपमा मात्र लिइन्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको आगामी योजना भनेको बीमाको समग्र क्षेत्र विस्तार नै हो । भएका सेवालाई यथावत् राख्दै आफ्ना ग्राहकका लागि नवीनतम सुविधा ल्याउने, पहँुच नपुगेका ठाउँमा सहज, सरल रूपमा बीमाको सेवा पु¥याउनु नै हाम्रो योजना हो ।
बीमा आवश्यक हो भन्दै गर्दा यसबारे जनचेतना पर्याप्त हुन नसक्नुको कारणचाहि“ के हो ? यसमा नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ?
निश्चय पनि बीमाबारे आम रूपमा जति जनचेतना फैलिनुपर्ने हो, त्यो नभएको स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने किन बीमा बजार ८–१० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन त ? यसमा दुवै पक्षको आआफ्नै भूमिका छ । तर, बीमामा कुनै सङ्घसंस्था वा व्यक्ति मात्र लागेर यसको दायरा फराकिलो नहुँदो रहेछ । किनभने अहिलेसम्म सबै कम्पनीले आफ्नो ढङ्गले यसको प्रचारप्रसार गरिरहेकै छन् । यसमा नियामक निकाय, बीमा कम्पनी, बीमा गर्ने व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका आवश्यक छ । बीमालाई केवल कम्पनीहरूले गर्ने व्यापार मात्र ठान्ने प्रवृत्तिले बीमाको विस्तार पनि हुँदैन । यसबाट सेवाग्राहीले लाभ लिन पनि गाह्रो छ ।
बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वासको कारण पनि बीमा विस्तार हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ ? कम्पनीहरूकै कारणले गर्दा पनि बजार विस्तार हुन नसकेको हो कि ?
थुप्रै बीमा कम्पनीबीच कतिपयले गलत काम गरे होलान् । त्यसको सजाय पनि भोगे होलान् । कुनै एक कालखण्डमा कुनै कम्पनीले गरेको गल्ती र त्यसको नकारात्मक प्रचारले पनि यस्तो भएको हो । तर, एक/दुई कम्पनीको कुरालाई लिएर समग्र बीमा बजारको विश्लेषण गर्नु न्यायोचित होइन । विकसित देशमा कुनै पनि कामका लागि बीमा आवश्यक गरिएको छ । बीमाविना कुनै ट्राञ्जेक्शन नै हुँदैन । हामीकहाँ जनचेतनाको कमी छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रा काम गर्ने पद्धति पनि सही नभएका होलान् । भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै सकारात्मक रूपबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।
बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ला ?
बीमा क्षेत्रमा यस्ता प्रवृत्ति देखिन सक्छन् । यो कम्पनीले भन्दा पनि आम बीमितले सोच्नुपर्ने कुरा हो । उनीहरूले नै झुटो दाबी नगरेमा यस्ता समस्या नै देखिँदैनन् । यसले बीमा बजारमा नराम्रो असर गर्दछ । तसर्थ, यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसमा हामीले मात्र नभएर आम बीमितिले नै बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । दाबी पाउँछु भन्ने विश्वासमा प्रक्रिया नपुर्‍याई गलत धारणा लिएर आउनुहुन्न । प्रक्रिया पुर्‍याएर आएमा हामी उचित रूपमा क्षतिपूर्ति दिन तयार छौं । यस्ता मौकाको फाइदा उठाउने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन ।
तुलनात्मक रूपमा अरू बीमा कम्पनीले भन्दा तपाईंहरूले उपभोक्ताका लागि थप कस्तो सुविधा दिनुभएको छ ?
प्रभु इन्स्योरन्स प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले १ वर्षपहिले नै मोबाइल एप्सको सेवा शुरू गरिसकेको छ । यो नै नेपालमा पहिलो पटक बीमा मोबाइल एप्स लञ्च गर्ने कम्पनी हो । हामीले नै अनलाइन पोलिसी शुरू गरेका हौं । सामान्य रूपमा हेर्दा हरेक कम्पनीका सेवा र पोलिसी उस्तै लागे पनि केही न केही भिन्नता अवश्य नै हुन्छन् । हामीले ग्राहकका लागि अर्काे सेवा शुरुआत गरिसकेका छौं । हाम्रो कम्पनीमा बीमा गर्ने ग्राहकले गाडी लिएर कुनै लामो दूरीमा गएको अवस्थामा बाटोमा गाडी बिग्रियो र सर्भिसिङ गर्नुपर्‍यो भने नजिकको शाखा कार्यालयमार्फत उसको गाडी नजिकको ग्यारेजबाट निःशुल्क रूपमा सर्भिसिङ गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं । कतिपय नजिकका ग्यारेजमा एक किसिमको सम्झौता भइसकेको छ । यसका लागि उपभोक्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
सरकारले नयाँ बीमा विधेयक ल्याएको छ । व्यवसायीको हिसाबले विधेयकप्रति यहाँको धारणा के छ ?
अहिलेसम्म हामीले विधेयकबारे सुनेका मात्र छौं । यसको व्यापक अध्ययनविना टिप्पणी गर्न अलि हतार होला । बीमा क्षेत्रका सरोकारका विषय हामीले यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई पेश गरेका छौं । सबैका सरोकार उस्तै छन् । छलफल भएर समयसापेक्ष रूपमा विधेयक पास होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
प्रस्तावित बीमा ऐनले धेरैओटा विषयमध्ये स्नातकोत्तर हासिल गरेको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?
कुनै पनि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सीईओको मुख्य भूमिका हुन्छ । बीमा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले सीईओ पदमा अनुभवी व्यक्ति नै आउन आवश्यक छ । तसर्थ, बीमा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु फाइदाजनक र सान्दर्भिक देखिँदैन । यसले बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन कार्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । बीमा क्षेत्रले सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व बहन गर्ने हुँदा अनुभवी व्यक्ति मात्र कम्पनीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था बनाउँदा सान्दर्भिक होला ।
बीमा विधेयकमा बीमा व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको यस्तो व्यवस्था फाइदाजनक छ । यसले बीमाको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै, यसले बीमाको क्षेत्र पनि फराकिलो हुने सम्भावना छ । बीमासम्बन्धी उजुरी गर्नकै लागि काठमाडौं आउनु पर्दैन । यद्यपि, अहिले पनि प्रदेशभित्र रहेका शाखा कार्यालयबाट कम्पनीहरूले बीमा सेवा प्रदान त गरेकै छन् । यस व्यवस्थाले बीमा सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । र, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमा जागरण बढाउने कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय बीमा बजारमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? समस्या नै छ या समाधान पनि हुँदै गएको छ ?
अहिले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अत्यधिक मात्रामा अभाव नै छ । जसले गर्दा बीमाको दायरा पनि बढ्न सकिरहेको छैन । यस क्षेत्रप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । एक कम्पनीमा काम गर्दै गरेका कर्मचारीलाई कुनै अर्काे कम्पनीले सेवासुविधा बढाएर लैजाने गरेको पाइन्छ । यस्ता समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बीमा तालीम केन्द्रको पनि शुरुआत गरिएको छ ।
यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने सम्भावना देखिन्छ । मुख्यतया तालीम केन्द्रमा कसरी प्रशिक्षण गर्ने, गराउने भन्ने विषयले पनि महत्व राख्छ । हामीले विभिन्न तहमा किन र केका लागि पढ्छौं भन्ने उद्देश्य जस्तै बीमा तालीम केन्द्रबाट तालीम लिँदा पनि सोही अनुरूपको उद्देश्य लिन आवश्यक छ । र, विस्तारै यसलाई शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा लैजान सके हामी बीमा बजारका लागि दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न सक्छौं ।
नयाँ पुस्तालाई बीमा क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा आकर्षण गर्न के गर्नुपर्छ होला ?
सर्वप्रथम त नयाँ पुस्तालाई भन्दा पनि समग्र समाजलाई बीमामा जोड्न आवश्यक छ । समाज बीमामा जोडिए भए यसको व्यवसाय फस्टाउँदै जान्छ । माग बढ्यो भने आपूर्ति पनि बढ्दै जान्छ । जसअनुसार बीमाको व्यावसायिक दायरा बढ्दै जान्छ । त्यसपछि नयाँ पुस्ता स्वतः यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छन् ।
‘अन द स्पोट’ बीमा दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ । यस विषयमा कम्पनीले के गर्छ ?
तत्काललाई हामी यो प्रावधान अपनाउने पक्षमा छैनौं । प्रक्रियागत रूपमा यो सम्भव पनि देखिँदैन । दाबी भुक्तानी गर्न प्रक्रियागत रूपमा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न अति आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, क्षतिको मूल्याङ्कनविना ‘अन द स्पट’ भुक्तानी दिन असम्भव छ । यो त्यति व्यावहारिक पनि देखिँदैन । यद्यपि, कतिपय अवस्थामा पेस्कीस्वरूप केही रकम दिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आम बीमितिले कम्पनीलाई ठग्ने धारणा पनि राखेका हुन्छन् । त्यसकारण हामी तत्काल यस्तो अभ्यासमा जाने तयारीमा छैनौं । तर, हामी आम बीमितलाई सरल र सहज तरिकाले दाबी भुक्तानी दिन कुनै पनि किसिमको कञ्जुस्याइँ गर्नेछैनौं ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा जागरण बढेको छ भनि“दै आएको छ । हो त ?
भूकम्पपछि बीमा साक्षरता बढ्नेमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुरूप साक्षरता बढेको पाइँदैन । त्यति ठूलो भूकम्प जाँदा पनि आममानिसमा अझै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छैन । भूकम्पअगाडि जुन रेसियोमा बीमा साक्षरता बढिरहेको थियो, अहिले पनि सोहीअनुरूप नै बढेको छ । भूकम्प जानुभन्दा अगाडि र पछाडिमा कुनै फरक देखिँदैन । भूकम्पले मानिसको मानसिकता परिवर्तन गरेको भए काठमाडौंमा उच्च मात्रामा बीमितको सङ्ख्या बढ्ने थियो । तर, त्यो देखिँदैन । मानिसले अब ७०/८० वर्षपछि मात्र भूकम्प आउँछ भन्दै बीमालाई बेवास्ता गरेका छन् । समाजमा आगजनी, बाढीपहिरोजस्ता जोखीम पनि छन् । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर आम समाज बीमामा जोडिन आवश्यक छ ।
काठमाडौंमा उद्योग, कलकारखाना, मोटर र जनसङ्ख्या बढी भएका कारण सङ्ख्यात्मक रूपमा यहाँ बीमितको सङ्ख्या बढी छ । तर, जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा काठमाडौंमा बीमितको सङ्ख्या कम छ । जसअनुसार राजधानी जस्तो शहरमै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मानिसकताको विकास कम मात्रामा भएको देखिन्छ ।
नेपालमा समग्र बीमा बजारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समय बीमाको दायरा र पहुँच जुन हिसाबमा बढेको छ, त्यसले बीमा बजारको भविष्य उज्ज्वल हुने देखिन्छ । यद्यपि, समयअनुसार बीमा क्षेत्रको विकास भने हुन सकेको छैन । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले बीमा क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । साथै, बीमासम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्ने कुरा उठिरहेका छन् । जसअनुसार पाठ्यक्रममा पनि बीमा विषय समेटियो भने निकट भविष्यमा सोचेभन्दा बढी मात्रामा बीमा बजारको विकास हुन्छ ।